Free Thinker: သင်တန်းကျောင်းတစ်ခု တည်ထောင်ခြင်း (၂)
သင်တန်းကျောင်းတစ်ခု တည်ထောင်ခြင်း (၂)
(၃) သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖွင့်ရန် လိုအပ်ချက်
လိပ်စာတစ်ခုထဲ၌ (သို့မဟုတ်) အဆောက်အဦတစ်ခုတည်း၌ နာမည်တူသင်တန်းနှစ်ခု (သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုတည်းမှ ဖြစ်စေ၊ အခြား သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေ) ဖွင့်ခွင့်မပြု။ သင်တန်းများတွင်သင်မည့် သင်ရိုးများကို MOM သို့ တင်ပြ အတည်ပြုချက် ရယူရသည်။ တစ်ခါတင်လျှင် သင်တန်းတစ်ခုအတွက် ဘာသာတစ်မျိုး (ဥပမာ - အင်္ဂလိပ်) ကိုသာ စဉ်းစားပေး သည်။ အခြား ဘာသာဖြင့် (ဥပမာ - မြန်မာဘာသာ) သင်လိုပါက သီးသန့်ထပ်တင်ရသည်။ ထိုဘာသာပြန်များမှာ အတည်ပြု ထားသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ရိုးနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ကိုက်ညီရသည်။
သင်တန်းကျောင်းတွင် အချိန်ပြည့်ကျောင်းအုပ် (သို့မဟုတ်) မန်နေဂျာ တစ်ဦး၊ အချိန်ပြည့် သင်တန်းဆရာ တစ်ဦး အချိန်ပိုင်းသင်တန်းဆရာတစ်ဦး ခန့်ထားရပါမည်။
အောက်ပါသင်တန်း လေးမျိုးသင်လိုပါက အစိုးရသို့ ရင်းနှီးမ,တည်ငွေ ဒေါ်လာ ငါးသောင်း တင်ရသည်။ ထိုသင်တန်း လေးမျိုးမှာ စင်ကာပူသို့ အလုပ်လုပ်ရန်လာသူ အလုပ်သမားများ မဖြစ်မနေတက်ရသော သင်တန်းဖြစ်၏။ ထိုသင်တန်းအောင်ပြီးမှ အလုပ်လုပ်ခွင့် Work Permit Card ထုတ်ပေးသည်။ ထိုသင်တန်းကို မအောင်မြင်ပါက စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်မပြု။
i. Construction Safety Orientation Course for Workers; (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများအတွက်)
ii. Safety Orientation Course for Workers (Metalworking); (သတ္တုထည်ပစ္စည်း လုပ်သားများအတွက်)
iii. Oil/Petrochemical Industries Safety Orientation Course for Workers; (ရေနံဓာတုလုပ်ငန်း လုပ်သားများအတွက်)
iv. Shipyard Safety Instruction Courses for Workers (General Trade, Hot-work Trade or Painter Trade) (သင်္ဘောကျင်းလုပ်သားများအတွက်)
ထို သင်တန်းလေးမျိုးမှအပ အခြားသင်တန်းများဆိုပါကမူ paid-up capital ဒေါ်လာ ငါးထောင်သာ တင်ရပါသည်။
သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုထူထောင်ရန် လိုအပ်ချက်များကို MOM website တွင်ဖော်ပြထားရာ စုစုပေါင်း ၃၂ ချက်ရှိ၏။ ၃၂ ချက်ဟု ဆိုရာတွင်ပင် တစ်ချက်ချင်းကို အသေးစိတ်ဖြန့်လိုက်ပါက အချက် ၅၀ လောက် ရှိပါသည်။ ဤလိုအပ်ချက်များကို အကြမ်းဖျဉ်း ရှင်းပြပါမည်။
သင်တန်းကျောင်းဖွင့်မည့်ကုမ္ပဏီကို ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ - ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) တွင် မှတ်ပုံတင်ရသည်။ စင်ကာပူတွင်ရှိသော မည်သည့်ကုမ္ပဏီမဆို ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ငယ်သည်ဖြစ်စေ ACRA တွင် မှတ်ပုံတင်ရ၏။ MOM တွင် လိုင်စင်လျှောက်သည့်အခါ ACRA တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် business profile ကိုပါ တွဲတင်ရသည်။ ထို့ပြင် သင်တန်းကျောင်းဖွင့်မည့်နေရာအား သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများဖြင့် တည်ဆောက်ပြီး မြို့ပြ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ - URA (Urban Redevelopment Authority) မှ ခွင့်ပြုချက် ယူရသည်။ ထိုစာကိုပါ ပူးတွဲ တင်ပြရသည်။
ကျွန်တော်တို့ငှားထားသောအခန်းက ၆ မီတာ မြင့်သည်။ ထို့ကြောင့် ထပ်ခိုးထည့်ပြီး အပေါ်အောက် သင်တန်းခန်း လေးခန်း လုပ်ရန် ကြံသေး၏။ သို့သော် မှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာ (PE - Professional Engineer) က မင်းတို့ ထပ်ခိုးထည့်ရင် URA က လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုသဖြင့် မထည့်တော့။ သူက Total Floor Area များသွားမှာ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားသော ဒီဇိုင်းဝန်အားထက်ပိုများသွားမည် ဖြစ်သောကြောင့် URA က လက်မခံခြင်းဖြစ်သည် ဆို၏။
သင်တန်း၌ လက်တွေ့သင်ကြားမည့် သင်ထောက်ကူ ငြမ်းစင် စသည်တို့ကို PE (Professional Engineer) ၏ တွက်ချက်၊ လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ဒီဇိုင်းအတိုင်း ဆောက်ရသည်။ ဤသည်မှာလည်း အထွေအထူးခေါင်းစားစရာ မလိုအောင် CDA ထဲတွင်ပင် စံဒီဇိုင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ CDA ဆိုသည်မှာ Curriculum Development Advisory ဖြစ်၏။ သင်တန်း တစ်ခုအတွက် CDA တစ်ခုရှိပြီး ထိုအထဲတွင် သင်ရမည့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အပြည့်အစုံကို ဖော်ပြထားပါသည်။
MOM သို့ လိုင်စင်တင်သည့်အခါ သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုပုံစံ အပြီးအစီးပြင်ဆင်ပြီးမှ တင်ရ၏။ လိုင်စင်ကျတော့မှ စပြင်ရတာမဟုတ်။ သည်တော့ လိုင်စင်တင်ဘို့ သင်တန်းခန်းကို အားလုံးပြင်ဆင်ရသည်။ အဲယားကွန်း၊ မီးပေးမှု၊ စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံ၊ Projector, Whiteboard, Flipchart စသည်။ ဤစာရင်းမှာလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဟိုဟာလေးထည့်ရင်ကောင်းမယ် စသဖြင့် တစ်ခုချင်း လိုက်စဉ်းစားနေစရာမလို။ သင်တန်းခန်းတစ်ခုတွင် မည်သည့်ပစ္စည်းများပါရမည်ကို တစ်ပါတည်း စာရင်းလုပ်ပေး ပြီးသားဖြစ်၏။ ထိုစာရင်းတွင်ပါသည့်ပစ္စည်းအားလုံး ထည့်သွင်း တပ်ဆင်ရသည်။ တပ်ဆင်ပြီးကြောင်း Checklist တွင် လက်မှတ်ထိုး၊ သင်တန်းခန်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်၊ လက်တွေ့လုပ်မည့် နေရာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ ဓာတ်ပုံများနှင့်တကွ လိုင်စင် လျှောက်လွှာနှင့် တစ်ပါတည်း ပူးတွဲတင်ပြရ၏။
ဓာတ်ပုံမျှသာ မကသေး။ မည်မျှသေချာသနည်းဆိုလျှင် သင်တန်းခန်းအတွက် ၀ယ်ထည့်ထားသည့် ပစ္စည်းဝယ် ဘောက်ချာများပါ ပူးတွဲတင်ပြရသေးသည်။ ကွန်ပြူတာ၊ ပရော်ဂျက်တာ၊ ပရင်တာ၊ စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်တွေဝယ်တာ၊ အဲယားကွန်းဆင်တာ အကုန်တင်ပြရသည်။ ထိုအထဲတွင် အမှတ်စစ်စက်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ ၀ယ်ရတာလည်း ပါ၏။ အမှတ်စစ်စက် ဆိုသည်မှာ အဖြေလွှာများကို လူဖြင့်စစ်တာမဟုတ်ဘဲ စက်ထဲထည့်စစ်တာ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို Optical Marking System ဟု ခေါ်၏။ ဤအကြောင်း နောက်တွင် အသေးစိတ် ရှင်းပြပါမည်။
အထက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းလေးခုအတွက် အမှတ်စစ်ရာတွင် ထိုပရိုဂရမ်နှင့်စစ်ရပြီး ရလဒ်ကို MOM database နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထား၏။ ထို့ကြောင့် အလုပ်သမားတစ်ဦး သင်တန်းတက်ပြီးမပြီး၊ အောင်မအောင်ကို MOM website တွင် အချိန်မရွေးစစ်ကြည့်လို့ ရသည်။
နောက်တစ်ခုမှာ သင်တန်းဆရာများ ခန့်ထားရေး ဖြစ်၏။ ခန့်ထားမည့်သင်တန်းဆရာစာရင်း၊ ထိုသင်တန်းဆရာများ၏ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ လက်မှတ်များ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမှတ်တမ်း စသည်တို့တင်ပြရသည်။ သင်တန်းဆရာများတွင် ရှိရမည့် အရည်အချင်းကို CDA တွင် ဖော်ပြထားသည်။ သင်တန်းဆရာများသည် မိမိသင်ကြားမည့် ဘာသာရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော အလုပ်၌ လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၅) နှစ် ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်သက်မပြည့်လျှင် သင်တန်းဆရာလိုင်စင် ချမပေးပါ။
သင်တန်းကျောင်းမှ ဆင်းလာသူများအား အားလုံးတပြေးညီ အရည်အသွေးများ ရရှိစေနိုင်ရန် သင်တန်းကျောင်းများတွင် သင်မည့်သင်ရိုး၊ သင်တန်းဆရာများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အစိုးရမှ ချမှတ်ပေးထားသည်။ မည်သည့်သင်တန်းအတွက် မည်သည့် သင်ရိုးအတိုင်းသင်ရမည်။ ထိုသင်တန်းကိုသင်မည့်ဆရာတွင် မည်ကဲ့သို့သော အရည်အချင်းများ ရှိရမည်ဟု သတ်မှတ်ထား၏။ ဤသည်ကို CDA (Curriculum Development Advisory) ဟု ခေါ်သည်။ CDA ကို အစိုးရ website (https://www.wshc.sg) တွင် အခမဲ့ download လုပ်ယူ၍ ရပါသည်။ CDA အကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် အပြည့်အစုံ ဖော်ပြပါမည်။
(၄) ACTA (အက်တာ)
သင်တန်းတစ်ခုကို သင်နိုင်ရန် ထိုသင်တန်းနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ရှိရမည်။ ဥပမာ - ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများ သင်မည့်သူသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် (စူပါဗိုက်ဆာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ မန်နေဂျာ စသည်) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ရှိရမည်။ အကယ်၍ သင်္ဘောကျင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများ သင်မည်ဆိုပါက marine အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ရှိရမည် စသည်။ (ကျွန်တော်က သင်္ဘောကျင်းတွင် ၁၉၉၈ မှ ၂၀၀၀။ ၂၀၀၅ မှ ၂၀၀၇ - လေးနှစ်လုပ်ဖူးသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ၅ နှစ် မပြည့်သဖြင့် marine သင်တန်းဆရာလိုင်စင်လျှောက်တော့ ချမပေးပါ။)
တတ်ကျွမ်းသူကို competent person ဟု ခေါ်၏။ တကယ်တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်သူများကိုသာ သင်တန်းဆရာ လိုင်စင် ချပေး၏။ Competent person ဖြစ်ရန် အနည်းဆုံး နှစ်ချက် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြရန် လို၏။ ဤသည်မှာ Skill + Knowledge ဖြစ်၏။ တစ်နည်းအားဖြင့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် + လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတို့ကို သက်သေပြရသည်။
သင်တန်းဆရာများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော သင်တန်းများရှိ၏။ ထိုသင်တန်းများထဲမှ သင်တန်းဆရာဖြစ်ရန် အခြေခံ အကျဆုံးသင်တန်းမှာ ACTA (Advanced Certificae in Training and Assessment) ဖြစ်၏။ ထိုသင်တန်းတွင် CU1 မှ CU6 ထိ module (၆) ခု ပါသည်။ အချိန်ပြည့်သင်တန်း ဆရာဖြစ်ရန် ထိုသင်တန်း (၆) ခုစလုံး တက်ရောက်အောင်မြင် လက်မှတ်ရပြီး ဖြစ်ရမည်။ အချိန်ပိုင်းဆရာဆိုလျှင်တော့ CU1, CU2, CU4, CU6 သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် လေးခု ရှိရမည်။ အပြည့်အစုံသိနိုင်ရန် အောက်တွင် မူရင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ACTA (Advanced Certificae in Training and Assessment)
There are two specialisation tracks in ACTA:
· Facilitated Learning – suitable for trainers and developers practising classroom-based facilitated training and courseware development.
· On-the-Job Training – suitable for trainers and developers practising the OJT training approach and use of blueprint in courseware development.
Course participants can opt for any of the two specialisation tracks:
A specialisation that will certify your ability in developing competency-based training programmes; delivering them inaclassroom-training environment; and assessingatrainee’s competency levels.
A specialisation that will certify your competence in developing and conducting OJT programmes; as well as assessing the competency level of workers in performingaspecific job function.
Under the Facilitated Learning track, you are required to complete CU1, CU2, CU3A, CU4A, CU5, and CU6.
Under the On-the-Job (OJT) track, you are required to complete CU1, CU2, CU3B, CU4B, CU5, and CU6.
If you have completed your ACTA in either track, you could top up on the two modules (CU3A / B and CU4 / B) from the other track and obtain2ACTA certification – one from each track.
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအရ ထိုသင်တန်းကို နှစ်မျိုးလေ့လာ သင်ယူနိုင်၏။ တစ်မျိုးမှာ သင်တန်းခန်းမ အတွင်း၌ ထိုင်လျှက် သင်တန်းဆရာပို့ချသည်ကို နားထောင်၊ လေ့ကျင့်သည့်သင်တန်း (စာတွေ့) (Facilitated Learning) ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုးမှာ သင်ကြားပို့မည့် နေရာသို့ သင်တန်းဆရာက သွားရောက်ကာ ဟောသလို လုပ်ရသကွ ဟု လက်တွေ့ပြသခြင်း (လက်တွေ့) (On-the-Job Training) ဖြစ်၏။
အထက်ပါဇယားကိုကြည့်လျှင် CU (၆) ခုအနက် CU1, CU2, CU5, CU6 များမှာ စာတွေ့ရော၊ လက်တွေ့သင်တန်း အတွက်ပါ အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး စာတွေ့သင်တန်းအတွက် CU3A နှင့် CU4A၊ လက်တွေ့သင်တန်းအတွက် CU3B, CU4B ဟု ကွာသွားသည်။ အထက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော သင်တန်း (၆) ခုကို မြန်မာလိုပြန်ပြရလျှင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
CU1: စင်ကာပူအစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အသွေး စည်းမျဉ်းဘောင်ကို နားလည်ခြင်း
CU2: သက်ကြီးသင်တန်းအခြေသဘောတရားများနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများကို သင်တန်း၌ အသုံးချခြင်း
CU3: သင်တန်းအစီအမံ (ပရိုဂရမ်) ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း
CU4: သင်တန်းပို့ချရန် ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် သင်တန်းပို့ချခြင်း
CU5: စာမေးပွဲ/အကဲဖြတ် ဇယား ပြင်ဆင်ခြင်း
CU6: ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံ (competency based) အကဲဖြတ်ခြင်း
CU ဆိုသည်မှာ Competency Unit ဖြစ်၏။ ဤတွင် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံ (competency based) ဆိုသော စကားလုံးကို သတိထားမိပါလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ သင်တန်းသားတကယ်တတ်မတတ်ကို စာတွေ့လက်တွေ့ စမ်းသပ်ခြင်း ဖြစ်၏။ ဥပမာ - safety harness အကြောင်း သင်ရာတွင် safety harness ကို မည်ကဲ့သို့ ရွေးချယ်ရသည်၊ စစ်ဆေးရသည် စသည့် စာတွေ့ ဗဟုသုတသာမက လက်တွေ့လည်း ၀တ်ပြခိုင်းခြင်းမျိုး ဖြစ်၏။
(မြန်မာပြည်တွင်လည်း ဤစနစ်မျိုး လုပ်လိုက်ပါသေးသည်။ ဘာတဲ့၊ စဉ်ဆက်မပြတ် အကဲခတ် ဆိုလား။ အစိုးရ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းများတွင် ကျင့်သုံးသည်။ စာမေးပွဲစစ်စရာမလို။ ကျောင်းသား၏ အရည်အသွေးကို ဆရာ ဆရာမက အကဲဖြတ်ကာ တကယ်တတ်မြောက်သည့် ကျောင်းသားကို အတန်းတင်ပေးခြင်းဖြစ်၏။
သို့သော် သိတော်မူကြသည့်အတိုင်း မြန်မာပြည်ဆိုသည်မှာ လုပ်လိုက်လျှင် သောက်တလွဲက များသည်။ သည်စနစ်က ငါတို့နဲ့ ကိုက်ညီသလားဆိုတာ မသုံးသပ်။ အများယောင်လို့ယောင်၊ အမောင်တောင်မှန်း မြောက်မှန်းမသိ။ သည်စနစ်ကောင်းသည်ဆိုကာ အတွေးအခေါ်အမြော်အမြင် ကြီးမားလှသည့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများက ချမှတ် ကျင့်သုံးလေတော့ရာ ကျောင်းသားကလေးများခမျာ ဆယ်တန်းရောက်လာသည့်တိုင် ကိုယ့်နာမည်ကိုယ် မှန်အောင် စာလုံးမပေါင်း တတ်သော အခြေအနေထိ ဆိုက်လေ၏။ ဤစနစ် စတင်ကျင့်သုံးလိုက်သည်မှစကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငဒူကလေးပေါင်း သိန်းနှင့်ချီ၍ ပေါ်ထွက်လာလေတော့ သတည်း။ ဤကား စကားချပ်)
အကြမ်းဖျဉ်းပြောရလျှင် ACTA က သင်ကြားနည်းဆိုင်ရာ သဘောတရားများ၊ အခြေခံစည်းမျဉ်းများ၊ သင်တန်းမှတ်စု ပြင်ပုံပြင်နည်း၊ သင်ကြားပုံ သင်ကြားနည်း၊ သင်တန်းသား တကယ်တတ်မတတ် အကဲဖြတ်ပုံ ဖြတ်နည်း၊ စာစစ်နည်း စသည်တို့ကို သင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရကျောင်းများ၌ ဆရာလုပ်တော့မည်ဆိုပါက ဆရာဖြစ်သင်တန်းကျောင်း၊ ဆရာအတတ်သင် ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ပညာရေးတက္ကသိုလ် စသည်တို့၌ သင်တန်းတက်ရသည်။ ထိုသင်တန်းများက ဆရာတစ်ယောက်၌ ရှိသင့် ရှိထိုက်သည့် အရည်အချင်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။
ACTA သည်လည်း ထိုနည်း၎င်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းဆရာတစ်ဦး သိသင့်သိထိုက်၊ တတ်သင့်တတ်ထိုက်သည်များကို စာတွေ့လက်တွေ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း ဖြစ်၏။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သင်တန်းကျောင်းများ မှိုလိုပေါက်နေအောင် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားနေကြကုန်၏။ ထိုအခါ ထို သင်တန်းကျောင်းများမှ သင်ရိုးများသည် ၎င်းတို့ ပေးနေသော သင်တန်းခေါင်းစဉ်များနှင့် ကိုက်ညီမညီ၊ သင်တန်းဆရာများသည် ၎င်းတို့ သင်ကြားနေသည့် သင်တန်းများအတွက် အရည်အချင်း ပြည့်မပြည့်၊ ထိုသင်တန်းများမှ ဆင်းလာသော သင်တန်းသား များသည် သင်တန်းမှ သင်ပေးလိုက်သည်များကို တကယ် တတ်၊ မတတ် စသည်တို့ကို စစ်ဆေးကြည့်ရန် မလိုပါသလော။
လောလောဆယ်တွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဤကဲ့သို့ စစ်ဆေးမည့်စနစ်၊ စစ်ဆေးမည့် စံ (criteria) များလည်း ချမှတ်အကောင် အထည် မဖော်နိုင်သေး။ သင်တန်းကျောင်းများ၊ သင်တန်းဆရာများ၌ ရှိရမည့် အရည်အသွေးကိုလည်း မသတ်မှတ်နိုင်သေး။ သင်တန်းဆရာများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန် အင်အားလည်း မရှိသေး။
နောင်များမကြာမီ ကာလတစ်ခုတွင်မူ လူအရင်းအမြစ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ရေး၌ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သင်တန်းကျောင်း များအား စနစ်တကျဖြစ်လာစေရန် မူဘောင်များ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။
============ ++++++++++++ ============
သငျတနျးကြောငျးတဈခု တညျထောငျခွငျး (၂)
(၃) သငျတနျးကြောငျးတဈခုဖှငျ့ရနျ လိုအပျခကျြ
လိပျစာတဈခုထဲ၌ (သို့မဟုတျ) အဆောကျအဦတဈခုတညျး၌ နာမညျတူသငျတနျးနှဈခု (သငျတနျးကြောငျးတဈခုတညျးမှ ဖွဈစေ၊ အခွား သငျတနျးကြောငျးတဈခုခုမှဖွဈစေ) ဖှငျ့ခှငျ့မပွု။ သငျတနျးမြားတှငျသငျမညျ့ သငျရိုးမြားကို MOM သို့ တငျပွ အတညျပွုခကျြ ရယူရသညျ။ တဈခါတငျလြှငျ သငျတနျးတဈခုအတှကျ ဘာသာတဈမြိုး (ဥပမာ - အင်ျဂလိပျ) ကိုသာ စဉျးစားပေး သညျ။ အခွား ဘာသာဖွငျ့ (ဥပမာ - မွနျမာဘာသာ) သငျလိုပါက သီးသနျ့ထပျတငျရသညျ။ ထိုဘာသာပွနျမြားမှာ အတညျပွု ထားသော အင်ျဂလိပျဘာသာသငျရိုးနှငျ့ အနီးစပျဆုံး ကိုကျညီရသညျ။
သငျတနျးကြောငျးတှငျ အခြိနျပွညျ့ကြောငျးအုပျ (သို့မဟုတျ) မနျနဂြော တဈဦး၊ အခြိနျပွညျ့ သငျတနျးဆရာ တဈဦး အခြိနျပိုငျးသငျတနျးဆရာတဈဦး ခနျ့ထားရပါမညျ။
အောကျပါသငျတနျး လေးမြိုးသငျလိုပါက အစိုးရသို့ ရငျးနှီးမ,တညျငှေ ဒျေါလာ ငါးသောငျး တငျရသညျ။ ထိုသငျတနျး လေးမြိုးမှာ စငျကာပူသို့ အလုပျလုပျရနျလာသူ အလုပျသမားမြား မဖွဈမနတေကျရသော သငျတနျးဖွဈ၏။ ထိုသငျတနျးအောငျပွီးမှ အလုပျလုပျခှငျ့ Work Permit Card ထုတျပေးသညျ။ ထိုသငျတနျးကို မအောငျမွငျပါက စငျကာပူတှငျ အလုပျလုပျခှငျ့မပွု။
i. Construction Safety Orientation Course for Workers; (ဆောကျလုပျရေးလုပျသားမြားအတှကျ)
ii. Safety Orientation Course for Workers (Metalworking); (သတ်တုထညျပစ်စညျး လုပျသားမြားအတှကျ)
iii. Oil/Petrochemical Industries Safety Orientation Course for Workers; (ရနေံဓာတုလုပျငနျး လုပျသားမြားအတှကျ)
iv. Shipyard Safety Instruction Courses for Workers (General Trade, Hot-work Trade or Painter Trade) (သင်ျဘောကငျြးလုပျသားမြားအတှကျ)
ထို သငျတနျးလေးမြိုးမှအပ အခွားသငျတနျးမြားဆိုပါကမူ paid-up capital ဒျေါလာ ငါးထောငျသာ တငျရပါသညျ။
သငျတနျးကြောငျးတဈခုထူထောငျရနျ လိုအပျခကျြမြားကို MOM website တှငျဖျောပွထားရာ စုစုပေါငျး ၃၂ ခကျြရှိ၏။ ၃၂ ခကျြဟု ဆိုရာတှငျပငျ တဈခကျြခငျြးကို အသေးစိတျဖွနျ့လိုကျပါက အခကျြ ၅၀ လောကျ ရှိပါသညျ။ ဤလိုအပျခကျြမြားကို အကွမျးဖဉျြး ရှငျးပွပါမညျ။
သငျတနျးကြောငျးဖှငျ့မညျ့ကုမ်ပဏီကို ကုမ်ပဏီမြားမှတျပုံတငျရေး အာဏာပိုငျအဖှဲ့ - ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) တှငျ မှတျပုံတငျရသညျ။ စငျကာပူတှငျရှိသော မညျသညျ့ကုမ်ပဏီမဆို ကွီးသညျဖွဈစေ၊ ငယျသညျဖွဈစေ ACRA တှငျ မှတျပုံတငျရ၏။ MOM တှငျ လိုငျစငျလြှောကျသညျ့အခါ ACRA တှငျ မှတျပုံတငျထားသညျ့ business profile ကိုပါ တှဲတငျရသညျ။ ထို့ပွငျ သငျတနျးကြောငျးဖှငျ့မညျ့နရောအား သတျမှတျထားသော စံနှုနျးမြားဖွငျ့ တညျဆောကျပွီး မွို့ပွ ပွနျလညျဖှံ့ဖွိုးရေး အာဏာပိုငျအဖှဲ့ - URA (Urban Redevelopment Authority) မှ ခှငျ့ပွုခကျြ ယူရသညျ။ ထိုစာကိုပါ ပူးတှဲ တငျပွရသညျ။
ကြှနျတျောတို့ငှားထားသောအခနျးက ၆ မီတာ မွငျ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ ထပျခိုးထညျ့ပွီး အပျေါအောကျ သငျတနျးခနျး လေးခနျး လုပျရနျ ကွံသေး၏။ သို့သျော မှတျပုံတငျအငျဂငျြနီယာ (PE - Professional Engineer) က မငျးတို့ ထပျခိုးထညျ့ရငျ URA က လကျခံမှာမဟုတျဘူး ဆိုသဖွငျ့ မထညျ့တော့။ သူက Total Floor Area မြားသှားမှာ တဈနညျးအားဖွငျ့ ဆောကျလုပျရနျ ခှငျ့ပွုထားသော ဒီဇိုငျးဝနျအားထကျပိုမြားသှားမညျ ဖွဈသောကွောငျ့ URA က လကျမခံခွငျးဖွဈသညျ ဆို၏။
သငျတနျး၌ လကျတှသေ့ငျကွားမညျ့ သငျထောကျကူ ငွမျးစငျ စသညျတို့ကို PE (Professional Engineer) ၏ တှကျခကျြ၊ လကျမှတျထိုးထားသညျ့ ဒီဇိုငျးအတိုငျး ဆောကျရသညျ။ ဤသညျမှာလညျး အထှအေထူးခေါငျးစားစရာ မလိုအောငျ CDA ထဲတှငျပငျ စံဒီဇိုငျးကို ဖျောပွထားပါသညျ။ CDA ဆိုသညျမှာ Curriculum Development Advisory ဖွဈ၏။ သငျတနျး တဈခုအတှကျ CDA တဈခုရှိပွီး ထိုအထဲတှငျ သငျရမညျ့သငျရိုးညှနျးတမျး အပွညျ့အစုံကို ဖျောပွထားပါသညျ။
MOM သို့ လိုငျစငျတငျသညျ့အခါ သငျတနျးကြောငျးတဈခုပုံစံ အပွီးအစီးပွငျဆငျပွီးမှ တငျရ၏။ လိုငျစငျကတြော့မှ စပွငျရတာမဟုတျ။ သညျတော့ လိုငျစငျတငျဘို့ သငျတနျးခနျးကို အားလုံးပွငျဆငျရသညျ။ အဲယားကှနျး၊ မီးပေးမှု၊ စားပှဲ၊ ထိုငျခုံ၊ Projector, Whiteboard, Flipchart စသညျ။ ဤစာရငျးမှာလညျး ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဟိုဟာလေးထညျ့ရငျကောငျးမယျ စသဖွငျ့ တဈခုခငျြး လိုကျစဉျးစားနစေရာမလို။ သငျတနျးခနျးတဈခုတှငျ မညျသညျ့ပစ်စညျးမြားပါရမညျကို တဈပါတညျး စာရငျးလုပျပေး ပွီးသားဖွဈ၏။ ထိုစာရငျးတှငျပါသညျ့ပစ်စညျးအားလုံး ထညျ့သှငျး တပျဆငျရသညျ။ တပျဆငျပွီးကွောငျး Checklist တှငျ လကျမှတျထိုး၊ သငျတနျးခနျးကို ဓာတျပုံရိုကျ၊ လကျတှလေု့ပျမညျ့ နရောကို ဓာတျပုံရိုကျကာ ဓာတျပုံမြားနှငျ့တကှ လိုငျစငျ လြှောကျလှာနှငျ့ တဈပါတညျး ပူးတှဲတငျပွရ၏။
ဓာတျပုံမြှသာ မကသေး။ မညျမြှသခြောသနညျးဆိုလြှငျ သငျတနျးခနျးအတှကျ ၀ယျထညျ့ထားသညျ့ ပစ်စညျးဝယျ ဘောကျခြာမြားပါ ပူးတှဲတငျပွရသေးသညျ။ ကှနျပွူတာ၊ ပရျောဂကျြတာ၊ ပရငျတာ၊ စားပှဲ၊ ကုလားထိုငျတှဝေယျတာ၊ အဲယားကှနျးဆငျတာ အကုနျတငျပွရသညျ။ ထိုအထဲတှငျ အမှတျစဈစကျနှငျ့ ဆော့ဖျဝဲ ၀ယျရတာလညျး ပါ၏။ အမှတျစဈစကျ ဆိုသညျမှာ အဖွလှောမြားကို လူဖွငျ့စဈတာမဟုတျဘဲ စကျထဲထညျ့စဈတာ ဖွဈပါသညျ။ ၎င်းငျးကို Optical Marking System ဟု ချေါ၏။ ဤအကွောငျး နောကျတှငျ အသေးစိတျ ရှငျးပွပါမညျ။
အထကျဖျောပွပါ သငျတနျးလေးခုအတှကျ အမှတျစဈရာတှငျ ထိုပရိုဂရမျနှငျ့စဈရပွီး ရလဒျကို MOM database နှငျ့ တိုကျရိုကျခြိတျဆကျထား၏။ ထို့ကွောငျ့ အလုပျသမားတဈဦး သငျတနျးတကျပွီးမပွီး၊ အောငျမအောငျကို MOM website တှငျ အခြိနျမရှေးစဈကွညျ့လို့ ရသညျ။
နောကျတဈခုမှာ သငျတနျးဆရာမြား ခနျ့ထားရေး ဖွဈ၏။ ခနျ့ထားမညျ့သငျတနျးဆရာစာရငျး၊ ထိုသငျတနျးဆရာမြား၏ ကိုယျရေးအတ်ထုပ်ပတ်တိ၊ လကျမှတျမြား၊ လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံမှတျတမျး စသညျတို့တငျပွရသညျ။ သငျတနျးဆရာမြားတှငျ ရှိရမညျ့ အရညျအခငျြးကို CDA တှငျ ဖျောပွထားသညျ။ သငျတနျးဆရာမြားသညျ မိမိသငျကွားမညျ့ ဘာသာရပျနှငျ့သကျဆိုငျသော အလုပျ၌ လုပျသကျ အနညျးဆုံး (၅) နှဈ ရှိရမညျ ဖွဈပါသညျ။ လုပျသကျမပွညျ့လြှငျ သငျတနျးဆရာလိုငျစငျ ခမြပေးပါ။
သငျတနျးကြောငျးမှ ဆငျးလာသူမြားအား အားလုံးတပွေးညီ အရညျအသှေးမြား ရရှိစနေိုငျရနျ သငျတနျးကြောငျးမြားတှငျ သငျမညျ့သငျရိုး၊ သငျတနျးဆရာမြား၏ လိုအပျခကျြမြားကို အစိုးရမှ ခမြှတျပေးထားသညျ။ မညျသညျ့သငျတနျးအတှကျ မညျသညျ့ သငျရိုးအတိုငျးသငျရမညျ။ ထိုသငျတနျးကိုသငျမညျ့ဆရာတှငျ မညျကဲ့သို့သော အရညျအခငျြးမြား ရှိရမညျဟု သတျမှတျထား၏။ ဤသညျကို CDA (Curriculum Development Advisory) ဟု ချေါသညျ။ CDA ကို အစိုးရ website (https://www.wshc.sg) တှငျ အခမဲ့ download လုပျယူ၍ ရပါသညျ။ CDA အကွောငျး နောကျပိုငျးတှငျ အပွညျ့အစုံ ဖျောပွပါမညျ။
(၄) ACTA (အကျတာ)
သငျတနျးတဈခုကို သငျနိုငျရနျ ထိုသငျတနျးနှငျ့ပတျသကျသော လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံ အနညျးဆုံး ၅ နှဈရှိရမညျ။ ဥပမာ - ဆောကျလုပျရေးနှငျ့ပတျသကျသညျ့ သငျတနျးမြား သငျမညျ့သူသညျ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးတှငျ (စူပါဗိုကျဆာ၊ အငျဂငျြနီယာ၊ မနျနဂြော စသညျ) လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံ အနညျးဆုံး ၅ နှဈရှိရမညျ။ အကယျ၍ သင်ျဘောကငျြးနှငျ့ပတျသကျသညျ့ သငျတနျးမြား သငျမညျဆိုပါက marine အတှအေ့ကွုံ အနညျးဆုံး ၅ နှဈရှိရမညျ စသညျ။ (ကြှနျတျောက သင်ျဘောကငျြးတှငျ ၁၉၉၈ မှ ၂၀၀၀။ ၂၀၀၅ မှ ၂၀၀၇ - လေးနှဈလုပျဖူးသညျ။ သတျမှတျထားသော ၅ နှဈ မပွညျ့သဖွငျ့ marine သငျတနျးဆရာလိုငျစငျလြှောကျတော့ ခမြပေးပါ။)
တတျကြှမျးသူကို competent person ဟု ချေါ၏။ တကယျတတျမွောကျ ကြှမျးကငျြသူမြားကိုသာ သငျတနျးဆရာ လိုငျစငျ ခပြေး၏။ Competent person ဖွဈရနျ အနညျးဆုံး နှဈခကျြ လကျဆုပျလကျကိုငျပွရနျ လို၏။ ဤသညျမှာ Skill + Knowledge ဖွဈ၏။ တဈနညျးအားဖွငျ့ သငျတနျးဆငျးလကျမှတျ + လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံတို့ကို သကျသပွေရသညျ။
သငျတနျးဆရာမြားအတှကျ သတျမှတျထားသော သငျတနျးမြားရှိ၏။ ထိုသငျတနျးမြားထဲမှ သငျတနျးဆရာဖွဈရနျ အခွခေံ အကဆြုံးသငျတနျးမှာ ACTA (Advanced Certificae in Training and Assessment) ဖွဈ၏။ ထိုသငျတနျးတှငျ CU1 မှ CU6 ထိ module (၆) ခု ပါသညျ။ အခြိနျပွညျ့သငျတနျး ဆရာဖွဈရနျ ထိုသငျတနျး (၆) ခုစလုံး တကျရောကျအောငျမွငျ လကျမှတျရပွီး ဖွဈရမညျ။ အခြိနျပိုငျးဆရာဆိုလြှငျတော့ CU1, CU2, CU4, CU6 သငျတနျးဆငျးလကျမှတျ လေးခု ရှိရမညျ။ အပွညျ့အစုံသိနိုငျရနျ အောကျတှငျ မူရငျးကို ဖျောပွထားပါသညျ။
• Facilitated Learning – suitable for trainers and developers practising classroom-based facilitated training and courseware development.
• On-the-Job Training – suitable for trainers and developers practising the OJT training approach and use of blueprint in courseware development.
အထကျဖျောပွပါ အခကျြအလကျမြားအရ ထိုသငျတနျးကို နှဈမြိုးလလေ့ာ သငျယူနိုငျ၏။ တဈမြိုးမှာ သငျတနျးခနျးမ အတှငျး၌ ထိုငျလြှကျ သငျတနျးဆရာပို့ခသြညျကို နားထောငျ၊ လကေ့ငျြ့သညျ့သငျတနျး (စာတှေ့) (Facilitated Learning) ဖွဈပွီး နောကျတဈမြိုးမှာ သငျကွားပို့မညျ့ နရောသို့ သငျတနျးဆရာက သှားရောကျကာ ဟောသလို လုပျရသကှ ဟု လကျတှပွေ့သခွငျး (လကျတှေ့) (On-the-Job Training) ဖွဈ၏။
အထကျပါဇယားကိုကွညျ့လြှငျ CU (၆) ခုအနကျ CU1, CU2, CU5, CU6 မြားမှာ စာတှရေ့ော၊ လကျတှသေ့ငျတနျး အတှကျပါ အတူတူပငျဖွဈပွီး စာတှသေ့ငျတနျးအတှကျ CU3A နှငျ့ CU4A၊ လကျတှသေ့ငျတနျးအတှကျ CU3B, CU4B ဟု ကှာသှားသညျ။ အထကျပါဇယားတှငျ ဖျောပွထားသော သငျတနျး (၆) ခုကို မွနျမာလိုပွနျပွရလြှငျ အောကျပါအတိုငျး ဖွဈပါသညျ။
CU1: စငျကာပူအစိုးရမှ ခမြှတျထားသော လုပျငနျးဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြမှုအရညျအသှေး စညျးမဉျြးဘောငျကို နားလညျခွငျး
CU2: သကျကွီးသငျတနျးအခွသေဘောတရားမြားနှငျ့ ကိုယျကငျြ့တရားစံနှုနျးမြားကို သငျတနျး၌ အသုံးခခြွငျး
CU3: သငျတနျးအစီအမံ (ပရိုဂရမျ) ဒီဇိုငျး ရေးဆှဲခွငျး
CU4: သငျတနျးပို့ခရြနျ ပွငျဆငျခွငျး နှငျ့ သငျတနျးပို့ခခြွငျး
CU5: စာမေးပှဲ/အကဲဖွတျ ဇယား ပွငျဆငျခွငျး
CU6: ကြှမျးကငျြမှုအခွခေံ (competency based) အကဲဖွတျခွငျး
CU ဆိုသညျမှာ Competency Unit ဖွဈ၏။ ဤတှငျ ကြှမျးကငျြမှုအခွခေံ (competency based) ဆိုသော စကားလုံးကို သတိထားမိပါလိမျ့မညျ။ ဤသညျမှာ သငျတနျးသားတကယျတတျမတတျကို စာတှလေ့ကျတှေ့ စမျးသပျခွငျး ဖွဈ၏။ ဥပမာ - safety harness အကွောငျး သငျရာတှငျ safety harness ကို မညျကဲ့သို့ ရှေးခယျြရသညျ၊ စဈဆေးရသညျ စသညျ့ စာတှေ့ ဗဟုသုတသာမက လကျတှလေ့ညျး ၀တျပွခိုငျးခွငျးမြိုး ဖွဈ၏။
(မွနျမာပွညျတှငျလညျး ဤစနဈမြိုး လုပျလိုကျပါသေးသညျ။ ဘာတဲ့၊ စဉျဆကျမပွတျ အကဲခတျ ဆိုလား။ အစိုးရ မူလတနျး၊ အလယျတနျး၊ အထကျတနျးကြောငျးမြားတှငျ ကငျြ့သုံးသညျ။ စာမေးပှဲစဈစရာမလို။ ကြောငျးသား၏ အရညျအသှေးကို ဆရာ ဆရာမက အကဲဖွတျကာ တကယျတတျမွောကျသညျ့ ကြောငျးသားကို အတနျးတငျပေးခွငျးဖွဈ၏။
သို့သျော သိတျောမူကွသညျ့အတိုငျး မွနျမာပွညျဆိုသညျမှာ လုပျလိုကျလြှငျ သောကျတလှဲက မြားသညျ။ သညျစနဈက ငါတို့နဲ့ ကိုကျညီသလားဆိုတာ မသုံးသပျ။ အမြားယောငျလို့ယောငျ၊ အမောငျတောငျမှနျး မွောကျမှနျးမသိ။ သညျစနဈကောငျးသညျဆိုကာ အတှေးအချေါအမွျောအမွငျ ကွီးမားလှသညျ့ နိုငျငံ့ခေါငျးဆောငျကွီးမြားက ခမြှတျ ကငျြ့သုံးလတေော့ရာ ကြောငျးသားကလေးမြားခမြာ ဆယျတနျးရောကျလာသညျ့တိုငျ ကိုယျ့နာမညျကိုယျ မှနျအောငျ စာလုံးမပေါငျး တတျသော အခွအေနထေိ ဆိုကျလေ၏။ ဤစနဈ စတငျကငျြ့သုံးလိုကျသညျမှစကာ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ငဒူကလေးပေါငျး သိနျးနှငျ့ခြီ၍ ပျေါထှကျလာလတေော့ သတညျး။ ဤကား စကားခပျြ)
အကွမျးဖဉျြးပွောရလြှငျ ACTA က သငျကွားနညျးဆိုငျရာ သဘောတရားမြား၊ အခွခေံစညျးမဉျြးမြား၊ သငျတနျးမှတျစု ပွငျပုံပွငျနညျး၊ သငျကွားပုံ သငျကွားနညျး၊ သငျတနျးသား တကယျတတျမတတျ အကဲဖွတျပုံ ဖွတျနညျး၊ စာစဈနညျး စသညျတို့ကို သငျပေးခွငျး ဖွဈပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ အစိုးရကြောငျးမြား၌ ဆရာလုပျတော့မညျဆိုပါက ဆရာဖွဈသငျတနျးကြောငျး၊ ဆရာအတတျသငျ ကောလိပျ၊ သိပ်ပံ၊ ပညာရေးတက်ကသိုလျ စသညျတို့၌ သငျတနျးတကျရသညျ။ ထိုသငျတနျးမြားက ဆရာတဈယောကျ၌ ရှိသငျ့ ရှိထိုကျသညျ့ အရညျအခငျြးမြားကို လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးသညျ။
ACTA သညျလညျး ထိုနညျး၎င်းငျး ဖွဈပါသညျ။ သငျတနျးဆရာတဈဦး သိသငျ့သိထိုကျ၊ တတျသငျ့တတျထိုကျသညျမြားကို စာတှလေ့ကျတှေ့ လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးခွငျး ဖွဈ၏။
ယခုအခါ မွနျမာနိုငျငံတှငျ သငျတနျးကြောငျးမြား မှိုလိုပေါကျနအေောငျ ဖှငျ့လှဈ သငျကွားနကွေကုနျ၏။ ထိုအခါ ထို သငျတနျးကြောငျးမြားမှ သငျရိုးမြားသညျ ၎င်းငျးတို့ ပေးနသေော သငျတနျးခေါငျးစဉျမြားနှငျ့ ကိုကျညီမညီ၊ သငျတနျးဆရာမြားသညျ ၎င်းငျးတို့ သငျကွားနသေညျ့ သငျတနျးမြားအတှကျ အရညျအခငျြး ပွညျ့မပွညျ့၊ ထိုသငျတနျးမြားမှ ဆငျးလာသော သငျတနျးသား မြားသညျ သငျတနျးမှ သငျပေးလိုကျသညျမြားကို တကယျ တတျ၊ မတတျ စသညျတို့ကို စဈဆေးကွညျ့ရနျ မလိုပါသလော။
လောလောဆယျတှငျမူ မွနျမာနိုငျငံ၌ ဤကဲ့သို့ စဈဆေးမညျ့စနဈ၊ စဈဆေးမညျ့ စံ (criteria) မြားလညျး ခမြှတျအကောငျ အထညျ မဖျောနိုငျသေး။ သငျတနျးကြောငျးမြား၊ သငျတနျးဆရာမြား၌ ရှိရမညျ့ အရညျအသှေးကိုလညျး မသတျမှတျနိုငျသေး။ သငျတနျးဆရာမြားကို ပွုစုပြိုးထောငျပေးရနျ အငျအားလညျး မရှိသေး။
နောငျမြားမကွာမီ ကာလတဈခုတှငျမူ လူအရငျးအမွဈကို ပွုစုပြိုးထောငျရေး၌ မရှိမဖွဈလိုအပျသော သငျတနျးကြောငျး မြားအား စနဈတကဖြွဈလာစရေနျ မူဘောငျမြား ခမြှတျ အကောငျအထညျဖျောနိုငျလိမျ့မညျဟု မြှျောလငျ့မိပါသညျ။
Posted by အေးငြိမ်း at 12:05 PM
သင်တန်းကျောင်းတစ်ခု တည်ထောင်ခြင်း (၃)
သင်တန်းကျောင်းတစ်ခု တည်ထောင်ခြင်း (1)
WSH MM ဂျာနယ် အယ်ဒီတာ့အာဘော်_Dec 2017
အယ်ဒီတာ့စကား (ဇန္န၀ါရီ - ၂၀၁၈)